Kufamba Kwemhepo neFeather Wiricheya
Kufamba Kwemhepo neWiricheya
Posted on Dai 3, 2017 November 20, 2020 by Emma Louie
Isu tese tinoziva kusimba kwenzvimbo kana ndege yazara, ndoda huwandu hwenzvimbo yemakumbo muchikamu chehupfumi. Kana iwe wedzera hurema mune musanganiswa, ruzivo rwese rwunonzwika kusagadzikana uye kusagadzikana. Kana iwe uri wiricheya mushandisi, usarega izvi zvichizengurira iwe kubva kufambira Ikoko dzimwe nzvimbo dzekugara idzo an kambani yendege Unogona kuita kuti rwendo rwako ruve nyore uye nyore sezvinobvira.
Kugadzirira Ndege Yakakodzera
Iyo Air Carrier Access Act (ACAA) inoshanda kune ese US airways. Izvi zvinoreva kuti nendege dzese dzekunze uye dzekunze neUS sekutanga kana kwairi kuenda kunodiwa kupa pekugara mahara kune avo vakaremara. Ive neshuwa yekuita imwe ongororo pane iyo airways inoita basa rakanakisa pakubata zvinodiwa. Vamwe vanoita basa riri nani kwazvo kupfuura vamwe. Pane mamwe marongero ayo ega ega ndege iwe ungangoda kuteedzera kana parwendo ne wiricheya kana kufamba Device.
Kutora Chigaro Chakanaka
Panogona kunge paine zvimwe zvinorambidzwa ku imwe mhando yezvigaro zvaungagone kugara. Kuti uwane chigaro chakakukodzera, pane mawebhusaiti anokuudza iwe chigaro cheairline mepu. SeatGuru, neTravel Advisor, inokuudza chigaro chaunofanira kudzivirira, huwandu hwenhabvu, uye nezvimwe zvakawanda.
Kana iwe uchida kuita chero chakakosha chikumbiro, bata wako ndege mushure mekutenga tikiti rako kuti vazive. Zvakanakisa kurega iyo ndege ziva zvakare kunyangwe kana yavo yekuchengetedza online iine chikamu chekuti iwe utarise bhokisi re "chakakosha chikumbiro".
Usati waenda kunhandare, ita chokwadi chekumaka yako wiricheya so hairasike. Iwe haudi kuti ishaikwe kana wasvika kwauri kuenda.
Paunenge uri panhandare yendege, unogona kutarisa mukati kana kuunza yako wiricheya newe mundege. Manual mawiricheya vanobvumidzwa kuve stow pane-bhodhi mundege. Simba wiricheya kana mudziyo mukuru wekufamba une bhatiri uchaendeswa kunzvimbo inotakura zvinhu. Kana wangosvika kwauri kuenda, yako wiricheya kana mudziyo wekufambisa uchadzoserwa kwauri. Kana zvichidikanwa, unogona kukumbira kushandisa ndege'sairicheya ndisati ndakwira ndege.
Vanhu vane mavhiripu ndimi munotanga kukwira ndege. Uchadaro kutakurwa kuchigaro nechigaro wiricheya. Kana uchinge wagara pasi, zorora uye unakirwe nerwendo.
kupinda Izvi re muna Mawiricheya asingaremi, Retail, hwiricheya, Wiricheya Nhau uye tagged kufamba kwemhepo, wiricheya yendege, kuremara, isina kurema wheelchair, kufamba, famba, parwendo, wiricheya, nhau dzewiricheya, kufamba newiricheya, wiricheya mushandisi, mavhiripu.
15 Matanho Ekushandisa Wiricheya Zvakachengeteka Kunze